I-PT-141 (i-Bremelanotide): Amachiza amatsha asetyenziselwa ukusetyenziswa kwezesondo zesini
2. Ingaba isebenza kanjani?
3. Isicelo se-PT-141
4. Zonke iiNzuzo ze-PT-141
5. I-PT-141 yeDysfunction yezesondo
6. Indlela yokusebenzisa i-PT-141
7. Amava ahlanganyele ngabasebenzisi be-PT-141
8. Ingozi Emva kokusebenzisa i-PT-141
1. I-PT-141 (i-Bremelanotide)
Ukuphucula isondo esenza ukuba ivuseleleke kwabasetyhini kwimizuzu yokuphatha, i-PT-141 yintetho yangempela. Bremelanotide ivela kuyo IMelanotan II; ngenxa yoko, inika imiphumo efanayo ye-aphrodisiac. I-Melanotan II incedisa ekunikeni i-pigmentation yekhumba kunye nokuphathwa kweengxaki zesini, kuquka inqweno yokunyaniseka kwabafazi.
I-peptide ye-PT-141 ayivelwanga emzimbeni ngokwemvelo njengamanye ama hormone okukhula. PT-141 (189691-06-3) ukuba yi-agonist engekhe ikhetho ye-melanocortin receptors sele isetyenziselwa unyango lweengxaki zesondo ixesha elide.
Ukufunyanwa kwe-PT-141 njengenye ye baxhasi bezesondo kuyamangalisa njengoko kwenzekile ngengozi. Usosayensi owaziwa ngokuba nguMac Hadley wazivotela njengomzekelo kwaye njengoko wayezama umzimba wakhe wafumana nzima kwiiyure ezisibhozo. Kwakuyimiphumo yokuba ne-dose ephindwe kabini kaMelatonin II, iqela elafunyenwe ngaphambili.
Ukuhlolwa kwe-Melanotan kwenzelwa kuqala kwiikota kwi-1960 kwaye zaya kwi-1980. I-Melanocortins yaziwa ngokudlala indima ebalulekileyo ekulawuleni imisebenzi emininzi yempilo. I-Melanotan 1, eyi-Melanocortin analog, iye yavavanywa njenge-agent ye-tanning ngelixa iMelanotan II yavavanywa njenge-ejenti yokuxhatshazwa ngokwesondo.
Ukusetyenziswa kwayo, ke kunjalo, kupheliswe emva kokufunyaniswa ukuba kukhokelela ukwandisa kwixinzelelo lwegazi zezifundo zayo zokuvavanya. Kwi-2016, i-peptide ye-PT-141 ivunyiwe yi-FDA njengonyango lokungasebenzi kwezesondo kwabasetyhini.
I-PT-141 isebenza nge hypothalamus, ngokukhokelela ekunyuseni kwinqweno yesondo. Ibopha kwi-receptors ye-melanocortin efunyenwe engqondweni, ngoko ke ithumela imiyalezo kwiimbilini kwizitho zesini. Ngokungafani nezinye izongezelelo zesondo ezifana ne-Viagra, ezisebenza kwindlela ye-vascular, i-PT141-141 ithintela ngqo kwi-libido yomntu. Esi sizathu sokuba kutheni amanye amachiza ezesondo angabonwa njengama-aphrodisiacs njengoko engathinti umnqweno wakhe ngqo.
I-PT-141 isebenza ngokuvuselela nokuvuselela i-hormone ye-dopamine, eyaziwayo ukuba idlale indima ebalulekileyo ekunyuseni isisusa somntu ngesini. I-Dopamine yikhampani eyaziwa kakhulu yintetho ye-neurotransmitter kwaye inendima yayo kukukhuthaza ukusebenza. Xa umntu enamazinga aphantsi e-dopamine, kuthetha ukuba i-libido yabo iya kuba sezantsi. Ixesha lesigxina se-PT-141 lijikeleze imizuzu ye-120.
♣ I-PT-141 i-sprays yomlomo
♣ PT-141 izixhobo
♣ PT-141 iipilisi
♦ Ukwandisa ukwaneliseka ngokwesondo
Ngaba ukhona ngenye indlela, wazibuza ukuba unokwenza ntoni ukuze unelisekile ngesondo? Inyaniso ngamanye amaxesha kuthatha okungaphezulu kokuphela kwesondo ukufezekisa i-'O 'enkulu. Ukwabelana ngesondo kunokunika i-orgasms kodwa kungekhona njengengqondo. Kwabesetyhini, kuya kuba nzima ngakumbi xa kuthelekiswa namadoda ngenxa ye-anatomy yabo.
Ukubaluleka kokusebenzisa abathuthuli bezocansi ekubangela i-orgasms ayinakuncitshiswa. I-PT-141 yabasetyhini Unika iimvakalelo ezinzulu xa unesondo. Ukuba ukhangele into ebalulekileyo ekuphuculiseni ukuzonwabisa kwakho ngokwesondo, le nkunkuma imangalisa ukubheja ngokuqinisekileyo.
♦ Unika amandla amaninzi
Unokuba ne-high drive drive kodwa akukho mandla okwenzayo. Ukungabikho kwamandla kungekuchaphazela kuphela ubomi bakho besondo kodwa imisebenzi yakho yemihla ngemihla nayo. Oko kuthetha ukuba awuyi kuphinda ujabule ekubandakanyekeni kwezinye izinto ozenzayo ngokuzithandela.
Ukungabikho kwamandla akuthethi ukuba ubomi bakho bobulili buphelile. Asikho isidingo sokukhathazeka rhoqo kuba kukho indlela onokufumana ngayo amandla okukhuthaza kunye neemvakalelo zakho zesondo.
Emva kokusebenzisa i-PT-141, uya kubona ukuba ufumana amandla amaninzi kwaye uzive uncinci.
♦ Ukukhuthaza ukuzithemba ngesondo
Esinye seziganeko ezibalulekileyo ezichonga ukuba ngaba uya kuyaneliseka ngesondo kukuzithemba kuwe. Ukuzithemba ngokwesondo kukuqinisekiswa okukuyo onokuyihambisa ebhedini. Ngokomzekelo, ukuba ngamava akho angaphambili olwabelana ngesondo nawe kunye neqabane lakho ufumene i-orgasms zasendle, uya kuzuza ukuzithemba ukuba ujonge ubugcisa.
Ngenye yeendlela ezinokuthi umntu abe nazo. Xa unethemba eliphezulu embhedeni, onke amava anokufumana unomdla kunokuba sele ukhona. Ngaphezu koko, kukukwenza ukhululeke xa ulala ngesondo.
Kubantu abaninzi, ukuzithemba ngesondo akuyona into elula ukuyifumana kuba mhlawumbi bacinga ukuba ubuthathaka babo buye babuthatha. Xa ithemba lakho liphantsi, ukufikelela kwi-orgasm kuba yinto enkulu. Inzuzo ezayo kunye nokusetyenziswa kwabaxhasi bezesondo kukuba yenza ukuba ube neentlobano zesini ezanelisayo.
PT-141 lijongana neengxaki zakho zesini ngoko ke kukunika konke ukuzithemba ohlala ukufunayo. Abesifazane abazithemba ngokwesondo bayaziwa ngokuba banesondo kwaye banomdla ngakumbi ebhedeni. Akumangalisi ukusebenzisa I-PT-141 yabasetyhini kwandisa imihla ngemihla. Emva kokusebenzisa i-PT-141, ndikuthembisa ukuba ukuzithemba kwakho ngokwesondo kuya kwandisa kakhulu ngexesha elifutshane kunokwenzeka.
♦ Ukwandisa i-libido kunye nesifiso sesondo
Uyazi ukuba ukhangele ukuba lakho iqabane likunika xa ubhekisa ubuthongo okanye intloko ukugwema isondo. Kuye kukhwankqise ngakumbi xa omnye wakho obalulekileyo ekulungele, kodwa yinto yokugqibela ocingayo. Oku kunokunyanzelisa ubuhlobo bakho, ngakumbi ukuba izinto ziye zadlula kule minyaka edlulileyo.
Namhlanje, ngaphezu kwe-30% yabasetyhini ababhekene nokungabikho kwesini somnqweno kwihlabathi jikelele. Isizathu sokuba le nto ixhaphake kakhulu phakathi kwabasetyhini kukuba ezininzi izinto zifaka isandla kulo. Nangona amanqanaba aphantsi e-estrogen okanye ukutshintshwa kwemveliso ye-hormone zezi zizathu zezizathu zokuba isifiso somntu wesini singathatha isithuba esilandelayo, iipilisi zokulawula ukuzala, imiba yolwalamano, ukunyamezela, ukuxinezeleka, uxinzelelo kunye namanye amayeza angakhokelela kuyo.
Ukuba uyaphawula ukuba umdla wakho wesini uhlawuleka ngemini, oko kungabonakalisa uphawu lokukhathazeka kwesondo ngesondo. Into enhle kukuba iP-PT-141 yokungasebenzi kakubi ngokwesondo kunokunceda ekupheliseni oku. Iqinisekisa ukuba ufumana umzimba ovukekileyo kwaye uvule rhoqo.
♦ Isikhumba seTans
Namhlanje ukukhangela isikhumba kuye kwaziwa. Kwiintsuku zokuqala, isikhumba sekhanda sasisiginci sokuba umntu usebenza phantsi kwelanga ixesha elide. Namhlanje, i-skin tan ithathwa ngokuba yilabo abathanda ukuchuma kunye nokukhanya okunempilo. Ngabantu abazibandakanya nazo zonke iintlobo zokucoca i-loan tanning, i-tanning engabonanga ilanga, ukutyhulwa kwangaphandle, kunye nokucutshungulwa kwangaphakathi, ucinga ukuba ngaba yiyiphi inzuzo yokucoca?
Ukuthungula kuya kukunika loo tan yegolide eya kushiya wonke umntu ehla. Ukuba ungumhlobo wabantu abathanda ukuma ngaphandle, ulusu lokucoca lufanele lube luhlu lwamabhakethi. Iidlangalaleni ziye zahlawula amawaka eedola ukuba isikhumba sabo siphucuke ngenxa yile nto ebanika impembelelo emininzi kwimisebenzi yabo. Bobabini sinokuvuma ukuba isikhumba esiluhlaza sibonakala sigula kwaye sibuhlungu. Ngangoko unokuba ne-wardrobe engcono kakhulu, inwele ekhangelekayo kunye namazinyo amhlophe, i-golden tan inokuyincoma ukujonga kwakho ngaphandle kokubambana nzima.
Ukuba ungumakhi womzimba kwaye uzive nje ukuba umzimba wakho onamatoni awuqapheli, kufuneka uzame ukutyhulwa kwesikhumba. I-tan iphakamisa intambo emzimbeni wakho, okwenza uzuzo lwakho lubonakale ngakumbi. Ubunzima kwaye unike i-gym yakho yonke into, kutheni ungafumani itan kukuncoma ukhangele i-muscular?
Kukho iindlela ezininzi zokufumana i-tan, kodwa le Isicelo se-PT-141 uhamba nomhla. Ukugqithisa kakhulu ilanga kunokukhokelela ekonakalweni kwesikhumba kwaye ngakumbi kunokuba ube nomhlaza wesikhumba. Enye yeenzuzo ze-PT-141 kukuba kukukhuselekile kwaye akunakwenzeka ukuba kubangele iziphumo zecala. I-Bremelanotide ikunika i-tan enhle kuba ichaphazela ukuveliswa kwe-melanin, enoxanduva lokukhutshwa kwe-skin pigmentation. Ngoko ukuba usoloko ufuna inkqubo yokuqhawula ngokukhuselekileyo kunye nomnye onokukunika ngemiphumo emihle, PT-141 (189691-06-3) yindlela yokuhamba.
♦ Ulungiso olunamandla
Ingaba ufumanisa umngeni wokufumana ukulungiswa okunamandla? Awuyena yedwa. Izigidi zabantu zibandezeleka kuyo kwaye abaninzi banamahloni ukuba bathethe nabani na.
Wonke umntu ufuna ukulungiswa kanzima kwaye kunamandla. Kwaye abo banwabileyo nobukhulu babo besilisa badinga ukubethelela izilungiso eziqinileyo zokuzonwabisa ngesondo. Eyona nto ukuba ufuna ukusetyenziswa komelele kwi-PT-141. Ingumgqugquzeli ophezulu wesondo oya kuqinisekisa ukuba ukulungiswa kwakho kunzima njengelawa.
(1). Ukuthelekiswa nezinye izikhulisi zesondo
I-PT-141 yabelana ngokufana nezinye izongezo zesini njenge-viagra, kodwa kukho umahluko ezimbalwa nazo. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, i-PT-141 isebenza nge-hypothalamus kungoko ichaphazela ngqo umnqweno wakho wesini. Kwelinye icala, omnye umsebenzi kwinkqubo yemithambo ngokwandisa inani legazi elihamba emzimbeni wonke, ngakumbi amalungu esini. Ezi ziphuculo zesondo azinakubizwa ngokuba ziiaprodisiacs.
Ngokutsho kweengxelo ze-PT-141, iziphumo ze-PT-141 zithatha ixesha elincinci ukufumana iziphumo. Ngokomzekelo, abanye abafazi banokubona ezinye iinguqu phakathi kweminye imizuzu ngelixa kwabanye, kungathatha iiyure. Konke kuzo, i-PT-141 yenye yeendlela zokunyusa zesondo ezisebenza ngokukhawuleza ukuba isiphumo sokusebenza kakubi ngokwesini sinokuvalelwa ngexesha elifutshane kunokwenzeka.
(2). Ngaba i-PT-141 ifanelekile ngakumbi kubafazi?
Njengokuba amadoda namabhinqa basebenzisa i-PT-141, kuboniswe ukuba yiyintandokazi yabesifazane. Kungenxa yokuba kubonelela kuninzi kwezibonelelo kunye nemiphumo embalwa yecala xa kuthelekiswa nabanye. Isibonakaliso kuphela esibathintelayo sisisonguluko kunye nokuhlanza, okusoloko kunqabile.
Ukongezelela, amabhinqa ayiphendule ngakumbi kwiziyobisi xa kuthelekiswa namadoda. I-PT-141 iza njengomsindisi kubasetyhini kuba kukho ezimbalwa iziyobisi ezijongene nokungasebenzi kwezesondo kubafazi.
Indlela eqhelekileyo yesicelo se-PT-141 ngombala. Le jenji isoloko iluncedo kubo bobabini nabasetyhini ekwenzeni unyango lweengxaki zesini.
Iijojo zivame ukulawulwa ngaphantsi, apho kukho amafutha amaninzi. Ngokuqhelekileyo, iingongoma zeejoyi zijikeleze isisu kunye nesisu esiswini okanye umlenze. I-jabs kufuneka inikezwe ngexesha elifanayo lusuku ukuze ukwazi ukufumana okulungileyo I-PT-141 amava.
Umthamo we-PT-141 ngokubanzi wamadoda kunye nabasetyhini ngu-2mg, omele unikezwe ngeyure ngaphambi kokulala ngesondo. Ukuba ukwenza okokuqala, ungazifaka i-1mg njengedoloji yokuvavanya ngaphambi kokungeza enye i-1mg imizuzu engamashumi amathathu kamva.
Ukuze ugweme ukugqithisa, awufanele udlule i-2mg kwieyure ezimashumi asixhenxe anesixhenxe. Kufuneka uhlale ukhetha ixesha elihle, elilungele wena.
I-PT-141 isicupu se-nasal enye indlela eqhelekileyo yokulawula i-PT-141. Abantu abaninzi bayithandayo kuba kulula ukuyisebenzisa. Ngokungenelela i-PT-141, unokukwazi ukufezekisa i-libido oyifunayo. Namanyathelo awuthathayo kwisicelo se-PT-141 se-nasal spray;
Vula impumlo yakho ngokucokisekileyo ukucima inqaku leyeza.
Funda yonke imiyalelo ebhokisini phambi kokuyilawula. Shake phambi kokusetyenziswa kwaye ubeke isikhewu esincinci ukuba oko kubonisiwe.
Sinyanzela ibhotile ngokunyanisekileyo uze uyifake imishanguzo ngomlomo wakho uvaliwe. Oku kungasetyenziselwa ngexesha elithe tye ukuze ungeke uhlaziye intloko yakho ngasemva. Njalo gcina ibhotile ecocekileyo kwaye ikhutshwe ukuze ugweme ukungcola.
I-libido yam iyabuyela kwisiqhelo
U-Agnes K uthi, "Ekuqaleni, ndithenge le mveliso yesikhumba sokucoca. Ulusu lwam luphendule kakuhle, kwaye ndagqiba kwelokuba ndisebenzise. Enye into eyenze ndiyithande i-PT-141 namava kukuba iyandisa i libido. Andizange ndicinge ukuba i-libido yam iya kutshintsha ekubeni ndandizama phantse zonke izilwanyana ezinamathelisi ezinjengeepilisi zamagilane. Ukususela ngobusuku bokuqala ndayisebenzisa, umnqweno wam uphelile apho. Ndiyakonwabela ngoku kunye neqabane lam. Ndiyazibuza ukuba kutheni ndingazi malunga nayo ngaphambili. Enyanisweni, ndivakalelwa kakhulu. "
ULilian D. uthi, "Ndiye ndafumana isondo esingenelisekanga ngokude ndikhumbule. I-libido yam isuka kumntu onamandla ukuba angayiva nangona ngethuba langaphambili. Ndacelwa ngamanye amapilisi ngugqirha wam, kwaye ndiyayinqabela imiphumo yaso, ngokukodwa ukuphefumula kwentliziyo nokulala. I-P-141 yam namava, kunjalo, ahluke. Andifane ndihlupheke ngenxa yiphina imiphumo, kwaye nakwii Ukuhlolwa kwe-PT-141 Ndiyifundile kwi-intanethi, bambalwa abantu abaye bathathwa naluphi na. Ngolu xhaswa ngesondo, ngoku ndiyakwazi ukunandipha ubomi bam zesondo ngaphandle kokuhlawula intlungu yokubandezeleka kwiimpembelelo ezininzi. Ndiyabonga, PT-141.
Unika iziphumo ezilungileyo
UMaggie S. uthi, "Ndiyilwaphulo lokukhangela kwesikhumba kwaye ndiye ndenza iminyaka elishumi elinesihlanu. Ndacinga ngokuzama le mveliso emva kokufunda i-PT-141 ukuphononongwa nokubona ezimbalwa ngaphambi nangemva kwemifanekiso ebonisa indlela enokunika ngayo i-tan yemvelo. Ndiyamangaliswa kwaye ndonwabile ngeziphumo. Iilanti zokuqhawula endisetyenzisileyo ziye zandishiya ngephunga elimnandi, kodwa yinto edlulileyo ngoku. I-orange hue endiyinike yona iyaphuma, kwaye ngoku ndijonge imvelo. Ndiyathanda into yokuba wonke umntu ucinga ukuba ndizalelwe ngale ndlela. Zama oku, kwaye mhlawumbi awuyi kubukela emva. "
Inika i-orgasms engcono
UBenjamin Paterson uthi, "Kungekudala, wam umfazi wayeka ukuhlambalaza, kwaye yonke into endizame ngayo yayibonakala iphosa. Wayelahlekelwa ngumdla, kwaye ngandlela-thile ndalahlekelwa yintembelo yam ngokwesondo ngenxa yokuba ndivakalelwa kukuba andinako ukumnelisa. Ndathetha nodokotela, kwaye wancenga ukuba ndizame oku. Ndandiyinto engathembekanga ngayo kodwa ndagqiba isipho sam umfazi wakhe ngosuku lokuzalwa waza ndabona indlela ehamba ngayo. Ndiyamangaliswa kukuba, sasilungile kakhulu ngalobo busuku. Wavuswa ngokukhawuleza kwaye wandixelela ukuba wayengenayo i-orgasms enamandla iminyaka. Ndandiziva kakuhle ukuba ekugqibeleni, umfazi wam unokuzonwabisa nokuthanda kwethu. Siye salela ukuba siza kuthunyelwa kwaye asikwazi ukulinda. Ndiya kuyincoma kumntu ovakalelwa kukuba abanakho ukufumana i-orgasm. "
UJesica S. uthi, "Olu phuculo lwezesondo luyona mveliso engcono kakhulu ndiyifumana. Ndandingumntwana ngenxa yobunzima bempilo endibuhlungu, kwaye izinto azizange zenzeke kwakhona. Ngaphandle kwomeko lomfazi kunye nokuziva ndingakhululeki, ndandisoloko ndifumana intlungu ngenxa yokuba andizange ndibe neentlobano zesini. I-PT-141 incede, ngokukodwa ngamathambo ami. Ndivakalelwa ngamandla, kwaye ndihlala ndifuna. Umyeni wam uthi andizange ndibe le-sexy kwaye ngoku ndifuna ukuyisebenzisa. I-PT-141 yenza umda omkhulu kumtshato wam, kwaye ndihlala ndibulela. Kufuneka yonke ipenki. "
8.Ingozi Emva kokusebenzisa i-PT-141
Abantu abaninzi abathatha le michiza, bava namava I-PT-141 iziphumo. Akumangalisi ukuba bathembela kuso ukuphatha ukungasebenzi kwezesondo kunye nekhanti labo. Nangona unikezela konke oku, kubalulekile ukwazi ukuba njengaye kukho i-PT-141 inzuzo ke ingozi.
Oko akuthethi ukuba ufanele uhlupheke ngenxa yeempembelelo; Kunoko, kukho umngcipheko ukuba into engafanelekanga okanye engalindelekanga ingenzeka. Abanye banokuba nobubele kakhulu ukuba awuyi kuqaphela. Abanye bahamba ngeeyure ezimbini zokuqala zokusetyenziswa kwazo. Nazi ezinye zeempembelelo ezinokuthi uzihlupheke ngokukhawuleza usebenzisa i-PT-141;
Ukwanda kwezocalulo zesondo- Abanye abantu bangasebenzisa le nkunkuma ukuba bahlanganyele ekuhlaselweni ngokwesini kunye nezinye iintlobo zobundlobongela ngesondo. Kungenxa yokuba umntu akanakho ukulungela ukulawula umnqweno wesondo ngoko ke ekugqibeleni uyaphula umthetho wesondo.
Umnqweno wesini ongasayi kuhamba -Iqhinga elidlulileyo lokulala ngesondo nangona emva kokuba kukho enye yemiphumo enokuthi uhlupheke ngayo emva kokuba uthathe le nkunkuma.
Ukukhawuleza ngokukhawuleza emva kokufaka inkunkuma kwesi sidakamizwa
Uxinzelelo lwezonyango, njengengcinezelo ephezulu yegazi
Ubunzima kwisiza sokungenwa kwe-injection-Injections iyaziwa ngokubangela ukungahambi kakubi emva kokulawulwa. Okuqhelekileyo ngokuqhelekileyo ngaphandle kokuba intlungu ibe nzima okanye isayithi ithatha isifo. Ukuze ugweme oko kwenzeka, sebenzisa rhoqo inaliti eyinyumba ukuze unike umjovo.
Ukuba neqabane kufuneka ibe yi-roses, i-sweethearts, i-chocolates, kunye nokuthandana. Ukuba oku akusiyo imeko kuwe, ngoko unokufumana ukukhathazeka, ngakumbi xa unengxaki ye-libido. Akukona kuphela ubulili obubalulekileyo elubudlelwaneni, kodwa luyingxenye ebalulekileyo yobomi bomntu. Ukuba nobomi obuhle bobulili buye kwabonakalisa ukuphucula impilo yonke kunye nokukhusela umntu ekuhluphekeni kwezinye izifo.
Ukuba uvakalelwa kukuba ubomi bakho bobulili buye buba buhlungu, kwaye ngokukhawuleza ulahlekelwa ngumdla, kufuneka utyalole ngokuzonwabisa kwakho ngokwesondo. Ekukhangela kwakho into yokutshathisa ubomi bakho ngokwesondo, unokufumana ezininzi iingcebiso kunye namaqhinga angenako ukwenza utshintsho. Ngokubandakanya baxhasi besini, unokwenza ubulili bukhululekile kwaye buhle.
Namhlanje abaninzi abancedisa ukuthengisa ngesondo kwiimarike bathembisa ukwanda kwe libido kunye nokunyamezela. Uninzi lwezi zizinto zokuthengisa ezithengiswayo abathengisi basebenzisa njengeendlela zokuthengisa.
Enyanisweni, uninzi lwezinto ezixhaswayo aluphandi ngophando lwezonyango kwaye oko uxelelweyo akunakho ukuchaneka. Ngaphambi kokuba ulungele ukuphucula isondo, kufuneka uhambe kwindawo ekhuselekileyo kuwe, kwaye ivela kumthengisi onokuthenjwa. Umgangatho kufuneka ube yiyona nto ephambili xa ugqiba ukubeka esitokweni sakho abadwebi nabasondisi bezesondo.
Ukuba usenokuba uzibuza ukuba yeyiphi umnqweno wezocansi ukuthenga kunye nalapho ungayithenga khona, ngoko sinokukunceda wenze eso sigqibo. Thina sihle kakhulu Umenzi we-PT-141 ngubani oza kunika nge-PT-141 engcono kwi-sex function. Kutheni ungakhange uphakamise i-sex yakho drive namhlanje?
I-Erectile Dysfunction, Inkinga yeeKlinikhi ze-Urologic- E-Book, ngoCulley Carson
Ukuxhatshazwa ngokwesini kwabesetyhini, ngo-Marta Meana.
Umsebenzi wezesondo kunye ne-Dysfunction, ehlelwe ngu-Elisabetta Consantini, uDonata Villari, uMaria Teresa Fibcamo